Ny fampitahorana dia misy fa ny fahatahorana tsy misy ! – MyDago.com aime Madagascar
Niditra mivantana tamin’ny antso an-tariby ny filoha Ravalomanana androany tsetsy amin’ny Magro Behoririka, nilaza mivantana amin’ny vahoaka izy fa hoavy ny Sabotsy izao ny tenany.
Samy nanentana ny fahatongavana maro amin’izany ny mpandahan-teny rehetra teto.I Zafilahy dia nilaza fa efa miala any ny olona avy any amin’ny faritra ary mitombo isan’andro ny olona eto amin’ny Magro, mianto-tena ireo hoy izy fa tsy misy famatsiam-bola. Anjanony ny asa fa fety io sabotsy io hoy izy hatrany.
Mangovitra tanteraka ny FAT. Tsy hanakorontana ny « messi » raha ho tonga eto fa hitady vahaolana hivoahana amin’ny krizy, hoy ihany ity solombavambahoaka ity.Hatramin’izay nisia’ny tolona izay hoy ny depiote Zafilahy dia mbola tsy manimba zavatra ny ara-dalana. Raha misy ny korontana dia tsy avy aty aminanay fa ianareo no « specialistes ». Ampy izay ny fividianana olona hanao zavatra ratsy ary samia tonga saina hoy hatrany ny tenenay.Ny namaranany n y kabariny dia ny hoe : « aza matahotra mino fotsiny ihany ».
Imanoela indray kosa dia nanambara fa mahatoky ny fiarovan’ny Tompo ny filoha Ravalomanana .Roa (2) taona isika nitolona, nilamina foana ka rehefa hody indray ve i Dada dia haditra ? hoy hatrany izy.
Ny pasitora Edouard indray dia nanambara fa ny fampitahorana dia misy fa ny fahatahorana tsy misy. Sao dia ianareo no mikorontana fa tsy ny firenena ?hoy izy. Mba moramora ny fiteny, hoy hatrany izy. Angaha tsy misy mpitandro ny filaminana eto ? Ary taiza tamin’ny 26 janoary 2009 ? Efa nandefitra 2 taona i Ravalomanana hoy izy.
Auteur Solo RazafyPublié le 17 février 2011 18 février 2011 Catégories Magro, Malagasy, Politique
1 réflexion sur « Ny fampitahorana dia misy fa ny fahatahorana tsy misy ! »
Mila manao plisy-plisy kely ry « lerony » â !!
Mila fanampiana na ara-tsakafo fotsiny aza, ireo mpitolona tonga avy lavitra !!
Tsara koa raha mba misy coin-cantine kely !!!!
Précédent Article précédent : Ho an’ny tafika Malagasy sy ny Anti-émeutes
Suivant Article suivant : Tafapetraka ny fangatahan’i F3M ny kianjan’Ambohijatovo !